ဟာရီကိနျး ပွနျလာခဲ့တဲ့ ယူကရိနျး 0-4 အင်ျဂလနျပှဲအပွီး မှတျမှတျရရ ဆိုစရာ7ခကျြ – Sports A2Z
ရောမအခကျအခဲကို ကြျောဖွတျခဲ့ရတဲ့ နှဈသငျး
အိမျကှငျးမှာ ကနျရတာမဟုတျလို့ ရောမမွို့ကို ကှာတားဖိုငျနယျပှဲအတှကျ အင်ျဂလနျအသငျးက ဝငျဘလီကနေ ခြီတကျလာခဲ့ပွီး ယူကရိနျးအသငျးကတော့ အမျစတာဒမျ၊ ဘူခါရကျဈနဲ့ ဂလပျစဂိုတို့မှာကစားပွီး ခြီတကျလာခဲ့တာပါ။ အိမျရှငျအားသာခကျြ မရှိခွငျး၊ အိမျကှငျးပရိသတျမရှိခွငျးနဲ့ ခရီးပနျးခွငျးတို့က နှဈသငျးစလုံးအတှကျ အခကျအခဲဖွဈခဲ့ရတာပါ။
လူစာရငျးပွောငျးပွီး အငျအားပွတဲ့ အင်ျဂလနျ
အဖှငျ့ပှဲမှာ ကီရနျ ထရဈပီယာကို ဘယျခွမျးမှာ အသုံးပွုတာကစပွီး ဂြာမနီနဲ့ပှဲက နောကျတနျး ၃ ယောကျတနျးအထိ လူစာရငျးက မငွိမျခဲ့ပါဘူး။ ဒီပှဲမှာတော့ ပှဲထှကျအသုံးမပွုတာ ကွာပွီဖွဈတဲ့ ဂဒြေနျ ဆနျခြိုနဲ့ မဆေနျမောငျ့တို့ကို အသုံးပွုခဲ့ပွီး သူတို့လညျး ခွစှေမျးပွခဲ့ပါတယျ။ ကစားသမားအငျအား ကှာဟမှုနဲ့ ရှေးစရာမြားတာက လှယျကူစခေဲ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီက ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ရှဖေိနပျဆုနဲ့ ဖနျတီးမှုအမြားဆုံးဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဟာရီကိနျးကတော့ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ဂြာမနီနဲ့ပှဲပထမပိုငျးထိ ဂိုးပေါကျပြောကျနခေဲ့သူပါ။ ဆောကျဂိတျရဲ့ ယုံကွညျမှုကို ဒီပှဲမှာ ထိုကျတနျကွောငျး ပွခဲ့ပွီး ဂိုးပေါကျကို ၄ ခါကနျပွီး ၃ ခါဂိုးပေါကျတညျ့ ၂ ဂိုးသှငျးဆိုတဲ့ အနအေထားက သူပွနျလာပွီဆိုပွီး ပွနတောလား?
အင်ျဂလနျ မဟာကြောကျဆောငျကွီးတှရေဲ့ မာကြောမှု
အင်ျဂလနျအသငျး မရှုံးသေးတာလညျး ခံစဈမာကြောနလေို့ဖွဈပွီး ဂိုးမရခဲ့တဲ့ စကော့တလနျတို့နဲ့ပှဲမှာလညျး သရရေခဲ့ပါတယျ။ အသငျးသေးတှနေဲ့မလို့ ဂိုးမပေးရတာလို့ ဝဖေနျမှုတှလေညျး ဂြာမနီအသငျးကို ဂိုးမပေးရတဲ့ပှဲက ခဖြေကျြပွခဲ့ပွီး ယူရို ၂၀၂၀ အတှငျး ဂိုးမပေးရတဲ့ တဈသငျးတညျးသော အသငျးမှ ခံစဈကောငျးတယျမပွောရငျ ဘယျအသငျးကို ပွောမှာလဲ?
ဒိနျးမတျက အင်ျဂလနျတို့အတှကျ ခကျခဲမယျ့ စာမေးပှဲလား
အသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမား ခရစ်စတီယနျ အဲရဈဆနျ မပါဝငျတာတောငျ ဒိနျးမတျက ခွစှောနတောပါ။ ယူရိုပွိုငျပှဲသကျတမျးတ‌ဈ‌လြှောကျအဖှငျ့ပှဲ ၂ ပှဲရှုံးပွီး ဆီမီးဖိုငျနယျတကျတဲ့ ပထမဆုံးအသငျး ဖွဈလာခဲ့သလို သာမနျပှဲခြိနျအတှငျး ၂ ပှဲဆကျ ၄ ဂိုးသှငျးနိုငျတဲ့ ပထမဆုံးအသငျးဖွဈနခေဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့ အင်ျဂလနျအတှကျတော့ ဖိုငျနယျအရောကျစဈမယျ့ စာမေးပှဲ ဖွဈနပေါပွီ။
အုပျစုပှဲစဉျတှမှော အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ သှငျးဂိုး ၂ ဂိုးစလုံးကို သှငျးယူပေးခဲ့တဲ့ စတာလငျဟာ ဒီပှဲမှာလညျး ဟာရီကိနျးရဲ့ အဖှငျ့ဂိုးကို ဖနျတီးပေးခဲ့ပွီး ခွစှေမျးပွခဲ့ပါသေးတယျ။ အင်ျဂလနျတိုကျစဈမှာ ပှဲတိုငျးခွစှေမျးပွ‌နိုငျတဲ့ တဈဦးတညျးသောသူ ဖွဈပွီးတော့ သူ့ရဲ့ မှနှေောကျနိုငျစှမျးနဲ့ ခြိနျသားကိုကျ ပွေးဝငျပိတျသှငျးနိုငျတာတှကေ မရှိမဖွဈ လိုအပျလာပါတယျ။
တညျကနျဘောတှမှော ကီရနျ ထရဈပီယာကို အားကိုးခဲ့ရပွီး သူမပါတော့ ဘယျသူရှိသလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှအေတှကျ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျနောကျခံလူ လုချရှောက ဟာရီ မကျဂှိုငျးယားရဲ့ သှငျးဂိုးကို တညျကနျဘောက ဖနျတီးပွီး အဖွပေေးလိုကျပါတယျ။ နောကျဆုံး ၂ ပှဲမှာ ၃ ဂိုးဖနျတီးပေးတာကို ကွညျ့ပွီး နောကျခံလူ ဟုတျရဲ့လားလို့ မေးခှနျးထုတျရတော့မလိုပါပဲ။
ရောမအခက်အခဲကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ နှစ်သင်း
အိမ်ကွင်းမှာ ကန်ရတာမဟုတ်လို့ ရောမမြို့ကို ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲအတွက် အင်္ဂလန်အသင်းက ဝင်ဘလီကနေ ချီတက်လာခဲ့ပြီး ယူကရိန်းအသင်းကတော့ အမ်စတာဒမ်၊ ဘူခါရက်စ်နဲ့ ဂလပ်စဂိုတို့မှာကစားပြီး ချီတက်လာခဲ့တာပါ။ အိမ်ရှင်အားသာချက် မရှိခြင်း၊ အိမ်ကွင်းပရိသတ်မရှိခြင်းနဲ့ ခရီးပန်းခြင်းတို့က နှစ်သင်းစလုံးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
လူစာရင်းပြောင်းပြီး အင်အားပြတဲ့ အင်္ဂလန်
အဖွင့်ပွဲမှာ ကီရန် ထရစ်ပီယာကို ဘယ်ခြမ်းမှာ အသုံးပြုတာကစပြီး ဂျာမနီနဲ့ပွဲက နောက်တန်း ၃ ယောက်တန်းအထိ လူစာရင်းက မငြိမ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီပွဲမှာတော့ ပွဲထွက်အသုံးမပြုတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဂျေဒန် ဆန်ချိုနဲ့ မေဆန်မောင့်တို့ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး သူတို့လည်း ခြေစွမ်းပြခဲ့ပါတယ်။ ကစားသမားအင်အား ကွာဟမှုနဲ့ ရွေးစရာများတာက လွယ်ကူစေခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီက ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရွှေဖိနပ်ဆုနဲ့ ဖန်တီးမှုအများဆုံးဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဟာရီကိန်းကတော့ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ဂျာမနီနဲ့ပွဲပထမပိုင်းထိ ဂိုးပေါက်ပျောက်နေခဲ့သူပါ။ ဆောက်ဂိတ်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဒီပွဲမှာ ထိုက်တန်ကြောင်း ပြခဲ့ပြီး ဂိုးပေါက်ကို ၄ ခါကန်ပြီး ၃ ခါဂိုးပေါက်တည့် ၂ ဂိုးသွင်းဆိုတဲ့ အနေအထားက သူပြန်လာပြီဆိုပြီး ပြနေတာလား?
အင်္ဂလန် မဟာကျောက်ဆောင်ကြီးတွေရဲ့ မာကျောမှု
အင်္ဂလန်အသင်း မရှုံးသေးတာလည်း ခံစစ်မာကျောနေလို့ဖြစ်ပြီး ဂိုးမရခဲ့တဲ့ စကော့တလန်တို့နဲ့ပွဲမှာလည်း သရေရခဲ့ပါတယ်။ အသင်းသေးတွေနဲ့မလို့ ဂိုးမပေးရတာလို့ ဝေဖန်မှုတွေလည်း ဂျာမနီအသင်းကို ဂိုးမပေးရတဲ့ပွဲက ချေဖျက်ပြခဲ့ပြီး ယူရို ၂၀၂၀ အတွင်း ဂိုးမပေးရတဲ့ တစ်သင်းတည်းသော အသင်းမှ ခံစစ်ကောင်းတယ်မပြောရင် ဘယ်အသင်းကို ပြောမှာလဲ?
ဒိန်းမတ်က အင်္ဂလန်တို့အတွက် ခက်ခဲမယ့် စာမေးပွဲလား
အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမား ခရစ္စတီယန် အဲရစ်ဆန် မပါဝင်တာတောင် ဒိန်းမတ်က ခြေစွာနေတာပါ။ ယူရိုပြိုင်ပွဲသက်တမ်းတ‌စ်‌လျှောက်အဖွင့်ပွဲ ၂ ပွဲရှုံးပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်တဲ့ ပထမဆုံးအသင်း ဖြစ်လာခဲ့သလို သာမန်ပွဲချိန်အတွင်း ၂ ပွဲဆက် ၄ ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလန်အတွက်တော့ ဖိုင်နယ်အရောက်စစ်မယ့် စာမေးပွဲ ဖြစ်နေပါပြီ။
အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ သွင်းဂိုး ၂ ဂိုးစလုံးကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ စတာလင်ဟာ ဒီပွဲမှာလည်း ဟာရီကိန်းရဲ့ အဖွင့်ဂိုးကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး ခြေစွမ်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။ အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှာ ပွဲတိုင်းခြေစွမ်းပြ‌နိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသူ ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ မွှေနှောက်နိုင်စွမ်းနဲ့ ချိန်သားကိုက် ပြေးဝင်ပိတ်သွင်းနိုင်တာတွေက မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာပါတယ်။
တည်ကန်ဘောတွေမှာ ကီရန် ထရစ်ပီယာကို အားကိုးခဲ့ရပြီး သူမပါတော့ ဘယ်သူရှိသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်ခံလူ လုခ်ရှောက ဟာရီ မက်ဂွိုင်းယားရဲ့ သွင်းဂိုးကို တည်ကန်ဘောက ဖန်တီးပြီး အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ၂ ပွဲမှာ ၃ ဂိုးဖန်တီးပေးတာကို ကြည့်ပြီး နောက်ခံလူ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရတော့မလိုပါပဲ။